IIMAANA Archives - Page 2 of 15 - Ibsaa Jireenyaa
December 30, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti yommuu ijoollee barsiisan ykn guddisan dogongora barsiistonni ykn guddistoonni gariin hojjatan ilaalle jira. Dogongora sanniin itti fufuun haa ilaallu:
December 28, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darban keessatti sababootaa erga fooyya’anii booda duubatti nama deebisan ilaalle jirra. Har’as itti fufuun sababa saglaffaa ni ilaalla. Innis Walitti dhufeenya keessatti dogongora barsiistoonni ykn haadha abbaan raawwataniidha. Sababa dogongora kanaatiin ijoolleen ykn dargaaggoonni rifachuun gara duubatti deebi’uu.
December 25, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti sababoota duubatti nama deebisan ilaalaa turreera. Ammas itti fufuun kutaa itti aanu ni ilaalla.
December 22, 2020 Sammubani Leave a comment
Sababoota erga fooyya’anii booda duubatti nama deebisan beekuun irraa fagaachuun wanta milkaa’innaa fi khaatimaa gaariitti nama geessudha. Sababni guddaan khaatimaa badaatti nama geessu wanta khaatima nama jalaa balleessuu beekuu dhiisuu fi irraa fagaachu diduudha. Tarii namni jireenya isaa guutuu ibaadaa hojjachuu danda’a. Garuu dhukkubni qalbii inni qabuu tokko ibaadaa kana jalaa balleessuu fi khaatimaa badaatti isa geessu danda’a. Kanaafu, sababoota erga fooyya’anii booda haala badaatti nama deebisan beeknee irraa fagaachuuf qophiidhaa?
December 20, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe irraa itti fufuun sababoota erga fooyya’anii booda duubatti nama deebisan ni ilaalla.
December 18, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti sababoota erga fooyya’anii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan keessaa tokko fedhii lubbuu hordofuu akka ta’e ilaalle jirra. Wanta fedhii lubbuu daangaa darbe akka hordofan nama taasisan keessaa tokko: wanta ijaan ilaalaniidha. Namni haraama yoo ilaale, keessi isaa ni gubata, erga fooyya’e booda duubatti deebi’a. Meeshaaleen teknolojii yeroo ammaa balbala haraamaa daran bal’isanii jiru. Meeshaalee kanniin keessaa diishiin ni eerama. Diishiin wanta golboo fi adii ta’e ala ykn xaaraa manaa irra godhamuun TV ittiin ilaalaniidha.
December 17, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti shahwaa (fedhii lubbuu) hordofuun sababoota erga fooyya’anii booda duubatti akka deebi’an nama taasisan keessaa tokko ta’u ilaalle jirra. Namni fedhii lubbuu keessumayyu fedhii saalaa yoo hordofe, fedhii isaatiif hidhamaa ta’a. Har’as itti fufuun fedhii lubbuu daangaa dabarsanii hordofuun khaatimaa (xumura) badaatti akka nama geessu seenaa waliin ni ilaalla.
Dubbisa Itti fufuu ni feetaa?
December 15, 2020 Sammubani Leave a comment
Dhugumatti, Islaama erga qabatanii booda duubatti deebi’uun adabbii guddaaf nama saaxila. Guyyaa Qiyaamaa namoonni Islaama erga qabatanii booda duubatti deebi’an fuulli isaanii ni gurraachata, adabbii cimaaf saaxilamu. Qur’aana keessatti:
Sababootaa fi Furmaata Waliin Oduu Warra duubatti deebi’anii-Kutaa 4
December 13, 2020 Sammubani Leave a comment
Erga fooyya’anii fi Islaama qabatanii booda duubatti deebi’uuf wantoota sababa ta’an ilaallu jalqabnee jirra. Dhugumatti wanti sodaachisaan erga guddatanii booda xiqqaachu, erga kabajamanii booda salphachuu, erga fuulli iimaanaan ife booda kufrii fi ma’asiyaan fokkachuudha. Sababoota kanatti nama geessan keessaa mee muraasa ammas ilaalu itti haa fufnu:
Sababootaa fi Furmaata waliin oduu warra duubatti deebi’anii-Kutaa-3
December 12, 2020 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbe keessatti sababoota fooyya’iinsa booda duubatti akka deebi’an nama taasisan keessaa sababa tokko ilaalle turre. Innis, “Du’aayitti xiyyeefannoo kennuu dhiisudha.” Akka yaadannootti namni du’aayi gochuun Rabbii olta’aa irraa gargaarsa argata. Karaa Islaamaa irra deemuuf gargaarsa cimaa barbaachisa. Kanaafu, gargaarsa kana argachuuf du’aayin wanta hafuu hin qabneedha. Namni yeroma du’aayi gochuu dhiisu, gargaarsa dhaba. Sababa kanaan, Islaama qabachuu irraa ni laafa. Har’as itti fufuun sababoota fooyya’iinsa booda duubatti akka deebi’an nama taasisan keessaa sababa 2ffaa ni ilaalla:
Kuusaa Select Month March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
SABABA FI FURMAATA WALIIN ODUU WARRA DUUBATTI DEEBI’ANII-KUTAA 12.2